Siyaasiyiintii ugu badnaa oo gaaray Kismaayo. | XAL DOON
Home NEWS Siyaasiyiintii ugu badnaa oo gaaray Kismaayo.
Siyaasiyiintii ugu badnaa oo gaaray Kismaayo.
Magalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubabda Hoose waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee golaha Aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhaari, iyada oo siweyn halkaasi loogu soo dhaweeyey.
Wafdigaan ayaa qeyb ka ahaa Xildhibaano ka tirsan labada Aqal, sida xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo ah guddoomiyaha Xisbiga ileys,Xildhibaan Mahad Salaad iyo Xubno kale.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland iyo mas’uuliyiintii horay u tegay ayaa sidoo kale qeybaha kala duwan ee Bulshada Magalada Kismaayo,waxaana Xubnahaan ay halkaasi u tageen ka qeyb-galka munaasabada caleema saarka Axmed Madoobe.
Shaley, waxaa Kismaayo gaaray madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed xilli la filayo in ay qabsoonto xafladda caleema saarka Axmed Madoobe, oo dib loogu soo doortay doorashadii madaxweynaha Jubbaland ee dhawaan dhacday, inkastoo uu muran badan hareeyay.